कसरी दिउँसै आमाको हातबाट चिʼतुवाले बालक खोʼसेर लग्यो ? यो स्थलगत रिपोर्ट हेर्नुहोस् ।
तनहुँ जिल्ला बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं ४ का इसाक सुनारलाई सोमबार भोज खाएर घर फर्किर्दै गर्दा बाघले आरʼ मण गर्यो र ज्याʼ न लियो । आमा र दाजुहरुसंग हात समाएर आउँदै गर्दै घर नजिकै बाटोमा इसाकलाई बाघले आʼक्रमʼण गरेको उनकी आमाले बताईन् ।
चितुवा भनिदै आए पनि यो बाघ जस्तै ठूलो रहेको र आफ्नै हातबाट माईलो छोरा इसाक सुनारलाई घिʼसार्दै लगेको उनले बताएकी छन् ।
आज करीब साँझ ६ बजेतिर गाउँमा भएको छेवरको भोज खाएर घर फर्कने क्रममा आमासँगै रहेका छोरा इशानलाई बाटैबाट चितुवाले झ म्टेʼर लगेको हो । घटʼ नास्थलबाट करीब ८० मिटर तल मृ ʼत अवʼस्थामा फेला पारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय डुम्रेले जनाएको छ ।
केही समयअघि पनि आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ रानागाउँमा एक बालकको मृʼत्यु भएको थियो । तनहुँको भानु नगरपालिकामा, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, ब्यास नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकामा चितुवाले आʼतʼङ्क मच्चाʼएपछि तनहुँवासीमा त्राʼस छाएको छ ।
कसरी दिउँसै आमाको हातबाट चिʼतु वाले बालक खोʼसेर लग्यो ? यो स्थलगत रिपोर्ट हेर्नुहोस् ।